Wax ka baro shaqooyinka, nolosha shaqada, shaqo raadinta iyo waxyaabo badan oo kale.
Ku tababaro imtixaanka C1.
Ku tababaro imtixaanka noorwiijiga ee A1-A2 ,A2-B1 iyo B1-B2.
Ku tababaro imtixaanka A1-A2 ama A2-B1.
Bogga af noorwiijiga ee mareegta Elevkanalen kaas oo loogu talo galay waxbarashada dadka waaweyn waxaad ka daawan kartaa, fiidiyowyo farabadan oo aad ka baran kartid mawduucyo muhiim ah oo ku saabsan afka norwiijiga iyo cilmiga bulshada.
Naxwaha af noorwiiji. Baro oo hel fikrad guud oo ku saabsan naxwaha af noorwiijiga.
Qoraal hordhac ah oo ay la socdaan su’aalo ku saabsan Qaramada middoobay. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan.
Daawo filimada ku saabsan tirokoobka. Laga soo qaatay mashruuca waxbarashada dabacsan(la rogrogi karo)
Bogga xisaabta ee mareegta Elevkanalen waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo farabadan. Waxaad baran kartaa wax ku saabsan tirooyin, jajab iyo boqollay, aljebra, isla’egyo iyo qaaciddooyin, cabbiraad, joomatari, garaafyo iyo fansaaro, tirokoob, itimaal iyo dhaqaale. Liiska waxaad ka kala dooran kartaa noorwiiji(bokmål), carabi, daari, baashto, kurmanji iyo tigrinya.